आइएमई डबलको डबलको डबल अफरका साप्ताहिक विजेता घोषित, सेवाग्राही केशब र विशालले पाए पठाइएको रकमको दोब्बर रकम - सुनाखरी न्युज
आइएमई डबलको डबलको डबल अफरका साप्ताहिक विजेता घोषित, सेवाग्राही केशब र विशालले पाए पठाइएको रकमको दोब्बर रकम
Posted on: September 26, 2021 - 7:02 pm
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – आइएमईले पर्व लक्षित दसैँमा डबलको डबलको डबल अफर अन्तरगत पहिलो हप्ताको विजेता सार्वजनिक गरेको छ । सिस्टममा आधारित ‘लक्की ड्र’ मार्फत नतिजा सार्वजनिक गर्दा सेवाग्राहीद्वय क्रमशः केशव दमाई र विशाल अधिकारी विजेता घोषित हुनुभएको हो ।
पानीपोखरी काठमाडौंमा अवस्थित आइएमई केन्द्रीय कार्यालयमा गत शुक्रबार आयोजित फेसबुक लाइभ मार्फत उक्त नजिता सार्वजनिक गरिएको थियो । वहाँहरूले संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) र कतारबाट अफर अवधिमा क्रमशः रू.४१,५०७ र रू.४८,०२० नेपालमा रहेका आफन्तलाई पठाउनु भएको थियो । अफर अनुसार आइएमईले वहाँहरू वा निजको सिफारिसमा वहाँहरूका निकटका आफन्तलाई लाई क्रमशः रू. ८३,०१४ र रू. ९६,०४० उपहार स्वरूप प्रदान गर्नेछ । आइएमईले सार्वजनिक गरेको पर्व लक्षित डबल डबलको डबल अफर यहीँ असोज १ देखि कार्तिक २६ (तद्अनुसार सेप्टेम्बर १७ देखि नोभेम्बर १२, २०२१) सम्म कूल ५७ दिनका लागि अहिले संचालनमा रहिआएको छ ।